အသံတိတ် လူသတ်သမားနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ လူသားများ - Kanbawza Tai News
Home ဆောငျးပါး အသံတိတ် လူသတ်သမားနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ လူသားများ
အသံတိတ် လူသတ်သမားနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ လူသားများ
July 31, 2019 ဆောငျးပါး,
အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့၊ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် ဆောင်းကြစို့။ Wear the crash helmet, save your life.
တောင်ကြီးမြို့၊ ဂေါက်ကွင်းအရှေ့ဘက် မျက်နှာစာပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးမှာ စိုက်ထူထားတဲ့ ယာဉ်အန္တရာယ် ပညာပေးဆိုင်းဘုတ်ထဲက စာသားတွေပါ။ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာ ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ မြန် မာဘာသာနဲ့ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွဲ ရေးရင် သူပါတယ်။ ငါမပါဘူး ဖြစ်မှာစိုးလို့ လူတိုင်းနားမလည်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ တွဲရေးထားလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးနဲ့ အဆိုတော် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတချို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းတဲ့ အချိန်အသုံးပြုရမယ့် အသက်ကယ်ဦး ထုပ်ဆောင်းပြီး အသိပညာပေး ဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးရဲ့ အဓိကဆိုလိုရင်းက ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အချိန် အသက်ကယ် ဦးထုပ်ဆောင်းကြဖို့။
အဲဒီ အသိပညာပေး ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ မျက်နှာ ချင်းဆိုင်လောက် အရှေ့မြို့ပတ်လမ်းဘက် အ ခြမ်းမှာလည်း ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ အမှတ် (၁၈) ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး (ရှမ်းတောင်) တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့နဲ့ အမျိုးသမီးငယ် ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပြီး ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ အချိန် ဦး အသက်ကယ်ထုပ် ဆောင်းလာအောင် စည်း ရုံး အသိပေး ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ထောင်ထားပါတယ်။ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာခြင်းဖြင့် မြို့တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို မြှင့်တင်ကြပါစို့ ဆိုတဲ့ စာသားလည်းထည့် သွင်းထားပါတယ်။ မြို့တော်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူ တွေ စည်းကမ်းရှိမှ မြို့တော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမြှင့် တင်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြောက်များစွာသော လူ့ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတွေအပြင် ယာဉ်စည်း ကမ်း လမ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်း မြို့တော်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အသိပညာပေး ဆိုင်းဘုတ်တွေကို အသေ အချာ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် မော်တော်ဆိုင် ကယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဦး စားပေး ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုင်း ဘုတ်ကြီး တစ်ခုမှာ မင်းသားမင်းသမီး ပုံတွေနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်းဖို့ ဖော်ပြထားတယ်။ မြို့တော်ဂုဏ်သိက္ခာ မြှင့်တင်ရေး ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုလုံးမှာလည်း အသက်ကယ်ဦးထုပ်ကို ဇောင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအား ဖြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်စီးနင်းသူတွေ နဲ့ အသက်ကယ်ဦးထုပ်ရဲ့ အရေးပါပုံကို တွေ့ရပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က အသိတရားရှိရှိ အသိပေး ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ပေမယ့် မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်ကယ် အသုံးပြုသူတွေကတော့ မဟုတ်တဲ့နေရာ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်းပြီး စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေ နေ့စဉ်လုပ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ဆင်ခြင်ရ ကောင်းမှန်းလည်း သိပုံမပေါ်ပါဘူး။
မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်စီးနင်းပြီဆို တာနဲ့ အသက်ကယ်ဦးထုပ် ဆောင်းရမယ်ဆိုတာ မောင်းနှင်သူတိုင်း၊ စီးနင်းသူတိုင်း သိရှိနားလည် နေရမယ့် စည်းကမ်းချက် တစ်ခုပါ။ မောင်းနှင် စီးနင်းသူတိုင်းလည်း ဒီစည်းကမ်းချက်ကို သိရှိ နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစည်းကမ်းချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာမှု အားနည်းတာကိုတော့ တောင်ကြီးမြို့ နေရာအနှံ့အပြား နေ့စဉ်တွေ့နေရပါတယ်။ အများစု ကျူး လွန်ဖောက်ဖျက်နေကြတာက လူငယ်လူရွယ်နဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါ။ ကလေးတွေအ သိတရားရှိအောင် သွန်သင်ဆုံးမ လမ်းပြရမယ့် လူကြီးလူမိုက်တချို့လည်း အသိတရားမဲ့စွာနဲ့ စည်းကမ်းပျက်တဲ့ အထဲပါဝင်နေပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းပြီး အသိပညာပေး အစီအစဉ် ဘယ် လောက်လုပ်လုပ် လူငယ်အများစုကတော့စည်း ကမ်းပျက်နေဆဲ စည်းကမ်းမဲ့နေဆဲပါပဲ။
စည်းကမ်းပျက်နေတာက အသက်ဆယ့် လေးငါးနှစ် အရွယ်လေးတွေပေါ့။ ဆိုင်ကယ်တစ် စီး ၃ ယောက် တင်စီးတယ်။ တစ်ယောက်မှ ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်ဆောင်းမထားဘူး။ ယာဉ် ကျောကိုလည်း သူတို့ ယူချင်သလို ယူမောင်း ကြတယ်။ လမ်းအသုံးပြုသူတွေ အဆင်ပြေဖို့ ထက် သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာ ရောက်ရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မောင်းချင်သလို မောင်းနေကြတာ။ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာမှုလည်း တော်တော် အားနည်းကြတယ်။ တချို့ဆို ရှိမှန်းတောင် သိပုံမပေါ်ကြဘူး။ ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်းတော့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ မကြာခဏဖြစ် ပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မတော်တဆမှုထက် စည်းကမ်းမဲ့မောင်းနှင်မှုကြောင့် ဖြစ်တာများတယ်လို့ မထသ အမှတ် ၁၂ အထူးယာဉ်လိုင်းမှ တက္ကစီယာဉ်မောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမျိုးခိုင်က ပြောပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မော်တော်ကားချင်းဖြစ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုထက် ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချင်း တိုက်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှု ရာခိုင်နှုန်း များတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသက်ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနဲ့ ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှု အတိုင်းအတာမှာလည်း ဆိုင်ကယ်ချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု ပိုများပါ တယ်။ ဆိုင်ကယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှု ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း ကြည့်မယ်ဆိုရင် အသက်ကယ်ဦးထုပ် မဆောင်းတာ၊ ဦးထုပ်ဆောင်းပေမယ့် မေးသိုင်းကြိုး တပ်မထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကြား အသက်ကယ်ဦးထုပ် အသုံးမပြုတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဆိုင်ကယ်စီးသင်တဲ့ အချိန်ကတည်းက သင်ကြားပေးသူတွေ ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ သင်ပေးခြင်း မရှိတာကြောင့်ဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေ့ရပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့တော်ဟာ မြို့ပြနေ လူဦးရေ တိုးပွားတာနဲ့အမျှ အများပြည်သူသုံး သွားလာရေးစနစ်မှာ မော်တော်ကားထက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှု တွင်ကျယ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလုပ်ခွင် သွားလာရေးနဲ့ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် ကိစ္စတွေအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်း ဖြစ်သလို အိမ်တိုင်းဆိုင်ကယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အိမ်တိုင်း လူတိုင်းနီးပါး မော်တော်ဆိုင်ကယ် အသုံးပြုကြပေမယ့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်း စည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်တာ၊ လမ်းအသုံးပြုသူတွေ လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေဆိုင်ရာတွေကိုတော့ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သိရှိလိုက်နာခြင်း မရှိကြပါဘူး။ တောင်ကြီးမြို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ အခါအားလျော်စွာ အသိပညာပေးမှုတွေ လုပ်ပေမယ့် ပြည်သူတွေ လိုက်နာမှု အားနည်းတာကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ နေ့စဉ် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
မိဘကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ညီအစ်ကိုသားချင်းကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးသင်ပေးတော့မယ်ဆိုရင် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း နားလည်အောင် တစ်ခါတည်း သင်ပေးရမယ်။ သင်ပေးမယ့် လူတွေကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းချက်တွေကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ သင်ပေးတဲ့ လူကိုက အဲဒီစည်းကမ်းချက်တွေကို မသိရှိရင် ကျန်တဲ့လက်ဆင့်ကမ်း သင်ပေးမယ့် လူကို စည်းကမ်းချက်တွေ မပြောပြနိုင်တော့ဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးက တော့ ကျွန်တော်တို့ တရားဝင် ကညနအစိုးရ တွေက ဖွင့်လှစ်တဲ့ သင်တန်းတွေ တက်ရောက် ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တိုက်တွန်းတာပေါ့။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ရှောင်ရှားရမယ့် အချက် က လက်လွတ်စပယ် သားသမီးတွေကို ဆိုင် ကယ်နဲ့ မသွားခိုင်းဖို့၊ ယာဉ်စည်း လမ်းစည်းသိ ရှိအောင် သင်ကြားပေးဖို့၊ ဥပဒေက ဘာတွေ ထုတ်ပြန်ထားလည်း သိရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တောင်ကြီးမြို့၊ အမှတ် (၁၈) ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ် ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအုပ်အောင်နွယ်က ပြောပါတယ်။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲ မှာ လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အချက် ၁၄ ချက်၊ ယာဉ် ကြောင့်ဖြစ်ပွားမှု ၅ ချက်နဲ့ လမ်းကြောင့် ဖြစ် ပွားမှု နှစ်ချက်ရှိတဲ့အတွက် လူတွေ စည်းကမ်း လိုက်နာမှု အားနည်းချက်ကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှု အများဆုံး ဖြစ်နေရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အ တိုင်းအတာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆိုင်ကယ် ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှု ရာခိုင်နှုန်းများတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၅ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အတွင်းနဲ့ ၁၅ နှစ်ကနေ ၂၉ နှစ် အတွင်း မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သူတွေကြား ယာဉ်တိုက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒီယာဉ် တိုက်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုအသံတိတ် လူသတ်ကောင် (Silent killer)လို့ ခေါ်တယ်လို့ အမှတ်(၁၈)ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒုတပ်ဖွဲ့ ရုံးမှ ရဲအုပ်အောင်နွယ်က ဆက်လက်ပြောကြား ပါတယ်။
ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းဝေးဖို့ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်စို့လို့ ဆိုထားပေမယ့် တောင်ကြီးမြို့ မှာ နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေကြည့် မယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အား နည်းခြင်း၊ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုပျက် ကွက်ခြင်း၊ ဥပဒေတွေကို နားလည်မှု မရှိခြင်း၊ နားလည်တဲ့လူတွေကလည်း ဥပဒေကို တမင် တကာ ချိုးဖောက်ခြင်း အစရှိတဲ့ အချက်တွေ ကြောင့် မဖြစ်သင့်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ၊ မဆုံး ရှုံးသင့်တဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာခြင်းဖြင့် မြို့တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ကြပါစို့လို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် မြို့တော် သိက္ခာကျစေမယ့် လုပ်ရပ်တွေ ရှောင်ရှား ပြီး ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာခြင်းဖြင့် မြို့သူမြို့သားများ ဖြစ်စေရန် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက မီးမှောင်းထိုး တင်ပြလိုက်ရကြောင်းပါ။
အသံတိတျ လူသတျသမားနဲ့ စညျးကမျးမဲ့ လူသားမြား
အန်တရာယျကငျးစဖေို့၊ ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျ ဆောငျးကွစို့။ Wear the crash helmet, save your life.
တောငျကွီးမွို့၊ ဂေါကျကှငျးအရှဘေ့ကျ မကျြနှာစာပွညျထောငျစု လမျးမကွီးမှာ စိုကျထူထားတဲ့ ယာဉျအန်တရာယျ ပညာပေးဆိုငျးဘုတျထဲက စာသားတှပေါ။ မွနျမာ၊ အင်ျဂလိပျနှဈဘာသာ ထညျ့သှငျးရေးသားထားပါတယျ။ မွနျ မာဘာသာနဲ့ တိုငျးရငျးသားဘာသာစကားတှဲ ရေးရငျ သူပါတယျ။ ငါမပါဘူး ဖွဈမှာစိုးလို့ လူတိုငျးနားမလညျတဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ တှဲရေးထားလားတော့ မပွောတတျပါဘူး။ နိုငျငံကြျော ရုပျရှငျမငျးသား မငျးသမီးနဲ့ အဆိုတျော အမြိုးသားအမြိုးသမီးတခြို့ မျောတျောဆိုငျကယျ စီးနငျးတဲ့ အခြိနျအသုံးပွုရမယျ့ အသကျကယျဦး ထုပျဆောငျးပွီး အသိပညာပေး ဆိုငျးဘုတျထဲမှာ ပါဝငျအားဖွညျ့ပေးထားတယျ။ ဆိုငျးဘုတျကွီးရဲ့ အဓိကဆိုလိုရငျးက ဆိုငျကယျစီးတဲ့အခြိနျ အသကျကယျ ဦးထုပျဆောငျးကွဖို့။
အဲဒီ အသိပညာပေး ဆိုငျးဘုတျနဲ့ မကျြနှာ ခငျြးဆိုငျလောကျ အရှမွေို့ပတျလမျးဘကျ အ ခွမျးမှာလညျး ယာဉျအန်တရာယျ၊ လမျးအန်တရာယျ နဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဆိုငျးဘုတျတှေ ရှိပါသေးတယျ။ အမှတျ (၁၈) ယာဉျထိနျးရဲ ဒုတပျဖှဲ့ခှဲမှူးရုံး (ရှမျးတောငျ) တပျဖှဲ့ဝငျ တခြို့နဲ့ အမြိုးသမီးငယျ ပွညျသူတှေ ပူးပေါငျးပွီး ဆိုငျကယျစီးတဲ့ အခြိနျ ဦး အသကျကယျထုပျ ဆောငျးလာအောငျ စညျး ရုံး အသိပေး ဖျောပွထားတဲ့ ဆိုငျးဘုတျကွီး ထောငျထားပါတယျ။ ယာဉျစညျးကမျးလမျးစညျးကမျး လိုကျနာခွငျးဖွငျ့ မွို့တျော၏ ဂုဏျသိက်ခာ ကို မွှငျ့တငျကွပါစို့ ဆိုတဲ့ စာသားလညျးထညျ့ သှငျးထားပါတယျ။ မွို့တျောမှာ နထေိုငျတဲ့ လူ တှေ စညျးကမျးရှိမှ မွို့တျောရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာမွှငျ့ တငျနိုငျမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ မွောကျမြားစှာသော လူ့ကငျြ့ဝတျ စညျးကမျးတှအေပွငျ ယာဉျစညျး ကမျး လမျးစညျးကမျးတှကေိုလညျး မွို့တျောမှာ နထေိုငျတဲ့ လူတှလေိုကျနာဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အသိပညာပေး ဆိုငျးဘုတျတှကေို အသေ အခြာ လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ မျောတျောဆိုငျ ကယျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ ဦး စားပေး ဖျောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဆိုငျး ဘုတျကွီး တဈခုမှာ မငျးသားမငျးသမီး ပုံတှနေဲ့ ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျဆောငျးဖို့ ဖျောပွထားတယျ။ မွို့တျောဂုဏျသိက်ခာ မွှငျ့တငျရေး ဆိုငျးဘုတျ တဈခုလုံးမှာလညျး အသကျကယျဦးထုပျကို ဇောငျးပေးထားပါတယျ။ ဒါကို ကွညျ့ခွငျးအား ဖွငျ့ မျောတျောဆိုငျကယျ မောငျးနှငျစီးနငျးသူတှေ နဲ့ အသကျကယျဦးထုပျရဲ့ အရေးပါပုံကို တှရေ့ပါတယျ။ တာဝနျရှိသူတှဘေကျက အသိတရားရှိရှိ အသိပေး ဆောငျရှကျမှုတှေ လုပျပမေယျ့ မွို့ပျေါမှာရှိတဲ့ ဆိုငျကယျ အသုံးပွုသူတှကေတော့ မဟုတျတဲ့နရော တဈလှဲဆံပငျကောငျးပွီး စညျးကမျးဖောကျဖကျြမှုတှေ နစေ့ဉျလုပျကွပါတယျ။ ကိုယျပိုငျဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ ဆငျခွငျရ ကောငျးမှနျးလညျး သိပုံမပျေါပါဘူး။
မျောတျောဆိုငျကယျ မောငျးနှငျစီးနငျးပွီဆို တာနဲ့ အသကျကယျဦးထုပျ ဆောငျးရမယျဆိုတာ မောငျးနှငျသူတိုငျး၊ စီးနငျးသူတိုငျး သိရှိနားလညျ နရေမယျ့ စညျးကမျးခကျြ တဈခုပါ။ မောငျးနှငျ စီးနငျးသူတိုငျးလညျး ဒီစညျးကမျးခကျြကို သိရှိ နားလညျကွလိမျ့မယျလို့ ယူဆမိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီစညျးကမျးခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး လိုကျနာမှု အားနညျးတာကိုတော့ တောငျကွီးမွို့ နရောအနှံ့အပွား နစေ့ဉျတှနေ့ရေပါတယျ။ အမြားစု ကြူး လှနျဖောကျဖကျြနကွေတာက လူငယျလူရှယျနဲ့ ကြောငျးသားကြောငျးသူတှပေါ။ ကလေးတှအေ သိတရားရှိအောငျ သှနျသငျဆုံးမ လမျးပွရမယျ့ လူကွီးလူမိုကျတခြို့လညျး အသိတရားမဲ့စှာနဲ့ စညျးကမျးပကျြတဲ့ အထဲပါဝငျနပေါတယျ။ တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ အရပျဘကျ အဖှဲ့အစညျးတှေ ပူးပေါငျးပွီး အသိပညာပေး အစီအစဉျ ဘယျ လောကျလုပျလုပျ လူငယျအမြားစုကတော့စညျး ကမျးပကျြနဆေဲ စညျးကမျးမဲ့နဆေဲပါပဲ။
စညျးကမျးပကျြနတောက အသကျဆယျ့ လေးငါးနှဈ အရှယျလေးတှပေေါ့။ ဆိုငျကယျတဈ စီး ၃ ယောကျ တငျစီးတယျ။ တဈယောကျမှ ဆိုငျကယျစီး ဦးထုပျဆောငျးမထားဘူး။ ယာဉျ ကြောကိုလညျး သူတို့ ယူခငျြသလို ယူမောငျး ကွတယျ။ လမျးအသုံးပွုသူတှေ အဆငျပွဖေို့ ထကျ သူတို့သှားခငျြတဲ့နရော ရောကျရငျပွီးရော ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မောငျးခငျြသလို မောငျးနကွေတာ။ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျးနဲ့ ပတျသကျပွီး လိုကျနာမှုလညျး တျောတျော အားနညျးကွတယျ။ တခြို့ဆို ရှိမှနျးတောငျ သိပုံမပျေါကွဘူး။ ဂရုမစိုကျဘူးလို့ ပွောရမှာပေါ့။ စညျးကမျးလိုကျနာမှု အားနညျးတော့ ယာဉျတိုကျမှုတှေ မကွာခဏဖွဈ ပါတယျ။ ဖွဈတဲ့ ယာဉျတိုကျမှုတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျ မတျောတဆမှုထကျ စညျးကမျးမဲ့မောငျးနှငျမှုကွောငျ့ ဖွဈတာမြားတယျလို့ မထသ အမှတျ ၁၂ အထူးယာဉျလိုငျးမှ တက်ကစီယာဉျမောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုမြိုးခိုငျက ပွောပါတယျ။
တောငျကွီးမွို့ပျေါမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ ယာဉျတိုကျမှုတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျ မျောတျောကားခငျြးဖွဈတဲ့ ယာဉျတိုကျမှုထကျ ကားနဲ့ဆိုငျကယျ၊ မျောတျောဆိုငျကယျခငျြး တိုကျတဲ့ ယာဉျတိုကျမှု ရာခိုငျနှုနျး မြားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အသကျဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုကျဒဏျရာရမှုနဲ့ ပကျြစီးဆုံး ရှုံးမှု အတိုငျးအတာမှာလညျး ဆိုငျကယျခငျြးဖွဈပှားတဲ့ ယာဉျတိုကျမှုကွောငျ့ ဆုံးရှုံးမှု ပိုမြားပါ တယျ။ ဆိုငျကယျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ယာဉျတိုကျမှု ကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးရတဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျး ကွညျ့မယျဆိုရငျ အသကျကယျဦးထုပျ မဆောငျးတာ၊ ဦးထုပျဆောငျးပမေယျ့ မေးသိုငျးကွိုး တပျမထားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ လူငယျလူရှယျ ကြောငျးသားကြောငျးသူတှကွေား အသကျကယျဦးထုပျ အသုံးမပွုတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုက ဆိုငျကယျစီးသငျတဲ့ အခြိနျကတညျးက သငျကွားပေးသူတှေ ကိုယျတိုငျ စနဈတကြ သငျပေးခွငျး မရှိတာကွောငျ့ဆိုတဲ့ အခကျြကို တှရေ့ပါတယျ။
တောငျကွီးမွို့တျောဟာ မွို့ပွနေ လူဦးရေ တိုးပှားတာနဲ့အမြှ အမြားပွညျသူသုံး သှားလာရေးစနဈမှာ မျောတျောကားထကျ မျောတျောဆိုငျကယျအသုံးပွုမှု တှငျကယျြလာတာ တှရေ့ပါတယျ။ အလုပျခှငျ သှားလာရေးနဲ့ ကြောငျးသှား ကြောငျးပွနျ ကိစ်စတှအေတှကျ မရှိမဖွဈ ပစ်စညျး ဖွဈသလို အိမျတိုငျးဆိုငျကယျ အသုံးပွုကွပါတယျ။ အိမျတိုငျး လူတိုငျးနီးပါး မျောတျောဆိုငျကယျ အသုံးပွုကွပမေယျ့ ယာဉျစညျးကမျး၊လမျး စညျးကမျးနဲ့ ပတျသကျတာ၊ လမျးအသုံးပွုသူတှေ လိုကျနာရမယျ့ ဥပဒဆေိုငျရာတှကေိုတော့ ၉ဝ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက သိရှိလိုကျနာခွငျး မရှိကွပါဘူး။ တောငျကွီးမွို့ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့ အနနေဲ့ အခါအားလြျောစှာ အသိပညာပေးမှုတှေ လုပျပမေယျ့ ပွညျသူတှေ လိုကျနာမှု အားနညျးတာကွောငျ့ မလိုလားအပျတဲ့ ယာဉျတိုကျမှုတှေ နစေ့ဉျ ဖွဈပျေါနတေဲ့အတှကျ စညျးကမျးပိုငျးဆိုငျရာတှေ လိုကျနာဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။
မိဘကပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ညီအဈကိုသားခငျြးကပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဆိုငျကယျစီးသငျပေးတော့မယျဆိုရငျ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး နားလညျအောငျ တဈခါတညျး သငျပေးရမယျ။ သငျပေးမယျ့ လူတှကေိုယျတိုငျ စညျးကမျးခကျြတှကေို နားလညျဖို့ လိုတယျ။ သငျပေးတဲ့ လူကိုက အဲဒီစညျးကမျးခကျြတှကေို မသိရှိရငျ ကနျြတဲ့လကျဆငျ့ကမျး သငျပေးမယျ့ လူကို စညျးကမျးခကျြတှေ မပွောပွနိုငျတော့ဘူး။ အတတျနိုငျဆုံးက တော့ ကြှနျတျောတို့ တရားဝငျ ကညနအစိုးရ တှကေ ဖှငျ့လှဈတဲ့ သငျတနျးတှေ တကျရောကျ ဖို့ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ တိုကျတှနျးတာပေါ့။ ပွညျသူတှေ အနနေဲ့ ရှောငျရှားရမယျ့ အခကျြ က လကျလှတျစပယျ သားသမီးတှကေို ဆိုငျ ကယျနဲ့ မသှားခိုငျးဖို့၊ ယာဉျစညျး လမျးစညျးသိ ရှိအောငျ သငျကွားပေးဖို့၊ ဥပဒကေ ဘာတှေ ထုတျပွနျထားလညျး သိရှိဖို့ လိုအပျတယျလို့ တောငျကွီးမွို့၊ အမှတျ (၁၈) ယာဉျထိနျးရဲဒုတပျ ဖှဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအုပျအောငျနှယျက ပွောပါတယျ။
ယာဉျတိုကျမှုဖွဈတဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲ မှာ လူကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အခကျြ ၁၄ ခကျြ၊ ယာဉျ ကွောငျ့ဖွဈပှားမှု ၅ ခကျြနဲ့ လမျးကွောငျ့ ဖွဈ ပှားမှု နှဈခကျြရှိတဲ့အတှကျ လူတှေ စညျးကမျး လိုကျနာမှု အားနညျးခကျြကွောငျ့ ယာဉျတိုကျမှု အမြားဆုံး ဖွဈနရေပါတယျ။ တဈနိုငျငံလုံး အ တိုငျးအတာ ကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး ဆိုငျကယျ ကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ယာဉျတိုကျမှု ရာခိုငျနှုနျးမြားတာ ကို တှရေ့ပါတယျ။ အသကျအရှယျအားဖွငျ့ ၅ နှဈမှ ၁၄ နှဈအတှငျးနဲ့ ၁၅ နှဈကနေ ၂၉ နှဈ အတှငျး မျောတျောယာဉျ၊ မျောတျောဆိုငျကယျ မောငျးနှငျသူတှကွေား ယာဉျတိုကျမှု အမြားဆုံး ဖွဈပျေါနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က ဒီယာဉျ တိုကျမှုကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးရတဲ့ ဖွဈစဉျကိုအသံတိတျ လူသတျကောငျ (Silent killer)လို့ ချေါတယျလို့ အမှတျ(၁၈)ယာဉျထိနျးရဲ ဒုတပျဖှဲ့ ရုံးမှ ရဲအုပျအောငျနှယျက ဆကျလကျပွောကွား ပါတယျ။
ယာဉျအန်တရာယျ ကငျးဝေးဖို့ ပူးပေါငျးပါဝငျ ဆောငျရှကျစို့လို့ ဆိုထားပမေယျ့ တောငျကွီးမွို့ မှာ နစေ့ဉျဖွဈပျေါနတေဲ့ ယာဉျတိုကျမှုတှကွေညျ့ မယျဆိုရငျ ပွညျသူတှေ ပူးပေါငျးပါဝငျမှု အား နညျးခွငျး၊ စညျးကမျးပိုငျးဆိုငျရာ လိုကျနာမှုပကျြ ကှကျခွငျး၊ ဥပဒတှေကေို နားလညျမှု မရှိခွငျး၊ နားလညျတဲ့လူတှကေလညျး ဥပဒကေို တမငျ တကာ ခြိုးဖောကျခွငျး အစရှိတဲ့ အခကျြတှေ ကွောငျ့ မဖွဈသငျ့တဲ့ ယာဉျတိုကျမှုတှေ၊ မဆုံး ရှုံးသငျ့တဲ့ အသကျဆုံးရှုံးမှုတှေ ဖွဈပျေါနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လိုကျနာခွငျးဖွငျ့ မွို့တျော၏ ဂုဏျသိက်ခာကို မွှငျ့တငျကွပါစို့လို့ ဆိုထားတဲ့အတှကျ မွို့တျော သိက်ခာကစြမေယျ့ လုပျရပျတှေ ရှောငျရှား ပွီး ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး လိုကျနာခွငျးဖွငျ့ မွို့သူမွို့သားမြား ဖွဈစရေနျ တဈထောငျ့တဈနရောက မီးမှောငျးထိုး တငျပွလိုကျရကွောငျးပါ။